एमालेका सांसदको विरोधबीच दुई विधेयक पारित
नेकपा (एमाले)का सांसदको विरोधबीच प्रतिनिधि सभाले दुई वटा विधेयक पारित गरेको छ।
संसद्को अवरोध हटाउन सभामुखले बोलाए सर्वदलीय बैठक
नेकपा (एमाले)का सांसदले लगातार संसद् अवरुद्ध गर्न थालेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्।
सभामुखले एमाले सांसदलाई बारम्बार सम्झाएको नियमावलीमा के छ? नाराबाजीमा उत्रेका नेकपा (एमाले) सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१ (ख), (ग) र (घ) सम्झन आग्रह गरिरहेका छन्।
आर्थिक अध्यादेश स्वीकृत गर्दा सभामुखले गरे प्रक्रियागत त्रुटि प्रतिनिधि सभा बैठकले आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ।
संसद्को वैधानिक सार्वभौमसत्ता माथि सभामुखबाटै चुनौती? संविधानविद्हरू एमसीसी जस्तो महत्त्वको कुनै पनि प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत हुनै हुँदैन भन्नु संसद्को वैधानिक सार्वभौमसत्ता माथिकै चुनौती भएको बताउँछन्।
संघीय संसद्‌मै संविधान विरोधी दुई प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको समिति अन्तर्गतको निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिले तयार पारेका बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदनमा संविधान र व्यवस्थासँग बाझिने विषय राखिएका छन्।
यो सरकार असफल भएमा व्यवस्था नै असफल हुन्छ : प्रदीप गिरि नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप गिरिले यो सरकार असफल भएमा संविधान र व्यवस्था नै असफल हुने बताएका छन्।
एमसीसी सम्झौता संसद्‍मा पेश गर्न भीम रावलको माग नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष भीम रावलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसँग सम्बन्धित सबै सम्झौता संसद्‍मा पेश गर्न माग गरेका छन्।
ऋण वा सापट लिएर पनि सबैलाई खोप लगाउँछौं : प्रधानमन्त्री देउवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी भए पनि सबै नागरिकलाई कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप लगाउने बताएका छन्।
अब जनता बलिया भएका छन् : नेम्वाङ नेकपा (एमाले) नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले अब जनता बलिया भएकाले देश पछाडि फर्किन नसक्ने बताएका छन्।
एमालेका १० सांसद जसले देउवालाई सर्वोच्चमा साथ दिए, तर विश्वासको मत दिएनन् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका नेकपा (एमाले)का २३ मध्ये १० सांसदले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत भने दिएनन्।
देउवालाई विश्वासको मत दिने यी हुन् ओली पक्षका आठ सांसद नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका आठ सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले पाए विश्वासको मत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाएका छन्।
नेमकिपाका सांसद सुवालले मतदानमा भाग नलिने नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको मतदानमा भाग नलिने भएका छन्।
महन्थ ठाकुरले भने- देउवालाई विश्वासको मत दिन्छौं
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने बताएका छन्।
विश्वासको मत माग्दै देउवाले भने- असल कामका लागि ओलीजीलाई धन्यवाद
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले मागे विश्वासको मत (लाइभ)
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत मागेका छन्।
प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित, विश्वासको मत लिन १५ मिनेटपछि बैठक बस्ने पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक केहीबेरका लागि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने भएकाले आजै दोस्रो पटक बैठक बस्ने भएको छ।
भीम रावलले यसकारण दिए राजीनामा नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष भीम रावलले आफ्नै पार्टी नेतृत्वलाई दोष दिँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ) सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरू भएको छ।
राष्ट्रपतिद्वारा ३ साउनमा संसद् अधिवेशन आह्वान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३ साउनमा संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन्।
राष्ट्रिय सभाको आठौं अधिवेशनमा १६ अध्यादेश पेश राष्ट्रिय सभाको आठौं अधिवेशन १२ दिनसम्म चलेर सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभा अधिवेशन अन्त्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेकी छिन्।
अपाङ्गता भएकालाई घर-घरमै खोप पुर्‍याउन माग राष्ट्रिय सभाकी सांसद विमला राई पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि घरघरमै कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न माग गरेकी छन्।
सरकारको विरोधमा राष्ट्रिय सभामा कालो टोपी प्रदर्शन सरकारको विरोधमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले राष्ट्रिय सभामा कालो टोपी प्रदर्शन गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभामा पेश भएका अध्यादेश अस्वीकार गर्ने कांग्रेसको निर्णय सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका अध्यादेश नेपाली कांग्रेसले अस्वीकार गर्ने भएको छ। यस सम्बन्धी संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिएको छ।
राष्ट्रिय सभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची आज राष्ट्रिय सभाको आठौं अधिवेशन शुरू हुन लागेको छ। संघीय संसद् भवन बानेश्वरमा आज अपराह्न ४ बजे बैठक बस्न लागेको हो।
राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभा अधिवेशन आह्वान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन्।